ဆာဟာရသဲကန္တာရ - သဘာဝအံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်ထူးဆန်းသောအရုပ်ရုပ် Absolut ခရီးသွား
ဆာဟာရသဲကန္တာရသည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည် ပင်လယ်နီ သို့ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုးသန်းခွဲစတုရန်းကီလိုမီတာကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းဖုံးလွှမ်း နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံ နေသောသူတို့အားအကြား အဲဂုတ္တုပြည်၌လစ်ဗျား၊ ချဒ်၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ မော်ရိုကို၊ တူနီးရှားနှင့်မော်ရီတေးနီးယား။
ထိုတိုးချဲ့မှုဖြင့်၎င်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်သင့်ပေ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးသောကန္တာရဖြစ်သည် နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဂေဟဗေဒလွှမ်းခြုံသောတစ်ခုချင်းစီကို၎င်း၏အထူးသဖြင့်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး ဆာဟာရတောင်ပိုင်းရှိစတက်လွင်ပြင်၊ ယင်းနှင့်အတူ တိဘက်စထု၏ xerophilous တောင်ကြီးတောင်ငယ်။ ထိုနည်းတူစွာနှင့်အတူယခင်နှစ်ခုမြား၏မ Tanezroufကမ္ဘာပေါ်ရှိအစွန်းရောက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်theရာမဆာဟာရသဲကန္တာရအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1.1 Ennedi ကုန်းပြင်မြင့်
1.2 အဆိုပါ Ahaggar အစုလိုက်အပြုံလိုက်
1.3 အဆိုပါ Mzab ချိုင့်ဝှမ်း
1.4 Nouadhibou, ဆာဟာရသဲကန္တာရထဲမှာသင်္ဘောသင်္ချိုင်း
1.6 Erg Chebbi, ခုံတစ်ပင်လယ်
1.8 Fezzan, ဆာဟာရသဲကန္တာရ၏လစ်ဗျားအစိတ်အပိုင်း
1.9 Uweinat တောင်၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောရုပ်ရုပ်
3 Sahara ဘယ်လိုရောက်ရမလဲ
ဆာဟာရသဲကန္တာရထဲမှာနေရာအနှံ့အပြားမှာငါတို့အကြောင်းကိုမင်းတို့မပြောတတ်ဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် osp ထိုနယ်မြေများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကောင်းစွာသိသောစစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များသာသူတို့ထံရောက်ရှိလာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်နိုင်သောအခြားဆိုဒ်များရှိသည် စီစဉ်ထားလေ့လာရေးခရီး သူတို့သည်ငါတို့၏လှပမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတောက်ပစေလိမ့်မည်။ ငါတို့ထဲကတချို့ကိုသိတော့မယ်။
ဤမယုံနိုင်စရာနေရာသည်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် ချဒ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အဝေးဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်သဲများကဝိုင်းရံထားသည့်၎င်း၏အထင်ကြီးလောက်အောင်ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်လွင်ပြင်များကိုထင်ရှားစေသည်။
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်, သဘာဝ Ennedi အတွက်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် colရာမုတ်များနှင့်တိုင်။ ပထမ ဦး ဆုံးအထဲကကြောင်းထွက်ရပ် ပဲပြားအမြင့် ၁၂၀ မီတာနှင့်အကျယ် 120 အကျယ်ရှိသည့်။ ထိုအညီတူညီသောစပ်စုဖြစ်ကြသည် ငါးခု၎င်း၏နာမကိုအမှီဖော်ပြသည်အတိုင်း, အရာ, ငါးအဖွင့်နှင့်အတူအောင်ပွဲခံမဟာတစ်မျိုးနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆင် Archတစ် ဦး pachyderm ၏ပင်စည်နှင့်၎င်း၏အထက်ပိုင်းတွင်ပင်မျက်စိဆင်တူသော။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်မလောက်မလောက်၊ သူတို့သည်လူမနေသောစည်ပင်သောနေရာ၌ရှိသည် ပန်းချီကား သောကာလအတွင်းစည်ပင်ခဲ့ကြောင်းပြသပါ Holocene (ဘီစီလေးထောင်စုနှစ်) ။ အထူးသဖြင့်promရိယာ၌ရှိသူများဖြစ်ကြသည် နီအိုလာအမျိုးသမီး ၂ မီတာအထိကိုယ်စားပြုသည်။
Ahaggar ၏ Massif
အဆိုပါ Ahaggar အစုလိုက်အပြုံလိုက်
ယခုငါတို့တောင်ဘက်သို့ရွှေ့ အယ်လ်ဂျီးရီးယား ဆာဟာရရှိအထင်ရှားဆုံးသောအခြားနေရာများသို့လည်ပတ်ရန်။ ဒါဟာ Ahaggar ၏တောင်တန်းအစုလိုက်ဖြစ်ပါတယ် ဟော့ဂါ။ ၎င်း၏အမြင့်များရှိသော်လည်းဤဒေသရှိရာသီဥတုသည်သဲကန္တာရရှိအခြားနေရာများထက်အလွန်နည်းပါးသောကြောင့်ခရီးသွားများစွာလည်ပတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုက်စားခြင်းကြောင့်တောင်များကိုရှုခင်းများကိုပေးသောဤတောင်တန်းများကိုပုံစံပြုထားသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အသွင်အပြင်။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ ထပ်၍ ဖြည့်စွက်ပါက၊ imuhagh, မြို့တ တူရကီ ဆာဟာရတွင်နေထိုင်သောကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာကိုမှော်အလှဖြင့်အပြီးသတ်အဆုံးသတ်မည်။
ဒီinရိယာထဲမှာအရေးအပါဆုံးမြို့, ခရီးသွား exc ည့်ထွက်ခွာရာမှ Tamanrasset။ သငျသညျစစ်မှန်သောအိုအေစစ်ပတ်ပတ်လည်တည်ဆောက်မြို့တစ်မြို့ကိုသိလိုလျှင်, ဤသည်သင်၏ ဦး တည်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်သမိုင်းမပြတိုက်နှင့်အခြားဘူမိဗေဒဆိုင်ရာပြတိုက်တစ်ခုလည်းရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီ့ကျော်ကြားမှုကပြင်သစ်ကိုတည်ထောင်ထားလို့ပါ ချားလ်စ်က de Foucauld, စူးစမ်းရှာဖွေသူနှင့်ခေါ်ဆိုမှု၏ဘာသာရေး "သဲကန္တာရ၏ဝိညာဉ်ရေးရာ".
အဆိုပါ Mzab ချိုင့်ဝှမ်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဟာရ၏အခြားအံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အယ်လ်ဂျီးရီးယားမှထွက်ခွာခြင်းမရှိခဲ့ပေ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်။ ၎င်းသည်ချိုင့်ဝှမ်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမြစ်တစ်စင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်နေထိုင်သည် မိန်းကလေးများလူမျိုးစုငယ်များအကြားဖြန့်ဝေပေးခဲ့သောဘာဘာလူမျိုးစုတစ်စုသည်ထိုဒေသရှိတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ဤတည်နေရာများထဲတွင်ဖြစ်ကြသည် Beni Isguenသူ၏ဗလီသည် ၁၂ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။ မယ်လီကာ, နင် o အဆိုပါ Ateuf။ သို့သော်အရေးကြီးဆုံးက Ghardaia၎င်း၏ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများနှင့်လူနေအိမ်များနှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောတစ်ခုလုံးကိုလည်းပေးသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော်လည်း Nouadhibou မြို့အားသချိုင်းတစ်ခုလုံးနေထိုင်ရာသဲကန္တာရတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိသည် Mauritaniaဆာဟာရသည်ပင်လယ်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်နေရာ။
အဓိကစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းဆိုက်ရောက်ချိန်တွင်နိုင်ငံ၏အစိုးရသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသင်္ဘောများကိုကမ်းခြေများသို့စွန့်ခွာခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ထိုနေရာတွင်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှယုတ်လျော့ယိုယွင်းနေသည့်သုံးရာခန့်ကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည် တကယ်တစ္ဆေရှုခင်း.
Este ksar o ခိုင်ခံ့သောမြို့ မော်ရိုကိုနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအရောင်အသွေးစုံလင်သောအရောင်များကြောင့်လူနေအိမ်များမှနေရောင်များကိုထင်ဟပ်စေသည်။ သင်ကနာရီအနည်းငယ်မှ drive ကိုတွေ့လိမ့်မည် Marrakech ကုလားအုတ်ယာဉ်တန်းများအသုံးပြုသောလမ်းကြောင်းဟောင်းပေါ်တွင်။
၎င်းသည်ကြေငြာခဲ့သည့် Ait Ben Haddou ၏လှပမှုပင်ဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် နှင့်မြောက်မြားစွာများအတွက် setting ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် movies Lawrence of Arabia၊ The Jewel of the Nile သို့မဟုတ် the Alexander the Great ကဲ့သို့ရုပ်မြင်သံကြားမှ Game of Thrones ကဲ့သို့သော။
Erg Chebbi, ခုံတစ်ပင်လယ်
ဒါ့အပြင်တည်ရှိသည် မော်ရိုကိုဒီသဲခုံပင်လယ်ဟာစတုရန်းကီလိုမီတာ ၁ ဝဝလောက်ကျယ်ဝန်းပြီးအရမ်းကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်။ ထိုဒေသရှိလူကြိုက်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာကုလားအုတ်တစ်စီးစီးပြီးစစ်မှန်သောဂျာမစ်တွင်အိပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤလမ်းကြောင်းများသည်မြို့မှထွက်ခွာသည် မာဇူဂါထို့ကြောင့်ဟိုတယ်အတော်များများနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်အဆင်ပြေသည်။ အထဲတွင်သင်လည်းတွေ့နိုင်ပါသည် Merzouga ပြိုင်ပွဲDakar Series ဆားကစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအပင်အနည်းကိန်းရှိပါတယ် ရေဒီယို ယင်း၏ခုံနှင့်ပတ်သက်။ ။ Merzouga တွင်နေထိုင်သူများသည်မိခင်တစ် ဦး နှင့်သူမ၏ကလေးများကိုကူညီရန်ငြင်းဆန်သောအခါသူတို့သည်ဘုရားသခင့်အမျက်ဒေါသဖြင့်မွေးဖွားလာသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ထို့နောက်ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုဖန်တီးသောကြောက်မက်ဘွယ်သောသဲမုန်တိုင်းနိုး။ ထိုဒေသရှိနေထိုင်သူများသည်ထိုခုံများမှကြွေးကြော်သံများကြားရသည်ဟုယနေ့ထိတိုင်ယုံကြည်နေကြသည်။
ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ မော်ရိုကို, ဆာဟာရ၏အဝင်ဝမှနောက်ထပ်အလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ် Ouarzazate သို့မဟုတ်အဖြစ် Uarzazat, အဖြစ်လူသိများသည်အဖြစ် «သဲကန္တာရဂိတ်»။ ဒါဟာခြေရင်းမှာတည်ရှိပါတယ် Atlas တောင်များ နှင့်ဒါခေါ်မှလာမယ့် တောင်ပိုင်းအိုအေစစ်.
အတိအကျ Atlas အဆိုပါဟုခေါ်ကြသည် ရုပ်ရှင်လေ့လာမှုများ မြို့ထဲမှာဘာရှိလဲ အကယ်၍ သင်ယခင်က Ait Ben Haddou အကြောင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအတွက်ဇာတ်ညွှန်းအဖြစ်ပြောခဲ့ပါက၊ ၎င်းသည်heရိယာ ၂၀ ဟက်တာကျယ်ဝန်းပြီး Urzazat ကိုဖန်တီးသောဤအစုံများကြောင့်ဖြစ်သည်။ မော်ရိုကို၏ရုပ်ရှင်မြို့တော်.
Ouarzazate အတွက် Taourirt ၏ Kashba
ဒါပေမယ့်မြို့ထဲမှာမင်းကိုကမ်းလှမ်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ စတင်ဘို့, ၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်များနှင့်perfectlyုံထိန်းသိမ်းထားသည် Taourit ၏ Citadel။ Isakashbah သို့မဟုတ်မြို့၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ထိုအချိန်တွင် Marrakech ၏ Pasha ၏နေအိမ်ဖြစ်သည့်ဘာဘာ၏ခံတပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကမ်းခြေရှိအလွန်ကြီးမားသောသဲရဲတိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တိကျသောပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏နံရံများနှင့်သဲကန္တာရ၏အလွန်ကြီးမားသည့်မျှော်စင်ကြီးများက၎င်းကိုထိုရှုထောင့်မှပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Fezzan areaရိယာသည်theရိယာ၏အံ့မခန်းဖွယ်အပိုင်းဖြစ်သည် လစ်ဗျားဆာဟာရ။ ၎င်းသည်သဲကန္တာရကိုတောင်များနှင့်ခြောက်သွေ့သောချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်ကျယ်ပြန့်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အားလုံးနီးပါးတွင်အကွာအဝေးတိုင်းတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်၌နေထိုင်သူများကိုအသက်သွေးကြောရန်အိုအေစစ်တစ်ခုပေါ်လာသည်။
Sahara ၏areaရိယာသည်မီးတောင်မီးတောင်များကဲ့သို့အထင်ကြီးစရာကောင်းသောရှုခင်းများကိုသင်ပေးသည် ဝဝါအင်နမ်စ်၎င်းသည်အိုအေစစ်နှင့်အတုရေကန်သုံးခုတည်ရှိသောကြောင့်သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်သဲပင်လယ် Murzuq၎င်း၏ခံ့ညားခုံနှင့်အတူ; အဆိုပါပိုင်ထိုက်သောသူမြား Akakus တောင်တန်းများသူတို့ရဲ့လှပသောပုံသဏ္,ာန်များသို့မဟုတ်ဆားငံအိုင်၏အစွန်းတွင်ရှိသောစွန်ပလွံပင်များနှင့်ကျူပင်များနှင့်အတူ Umm-al-Maa, ရှေးခေတ်၏အခွင့်အာဏာ megafezzan ရေကန် အရာအင်္ဂလန်ကဲ့သို့ကြီးမားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီinရိယာထဲမှာအရေးအပါဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ် ဆာဘားလစ်ဗျားနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင်ဟောင်းမိုဟာမက်အယ်လ်ကဒါဖီကြီးပြင်းလာသည့်လူ ဦး ရေတစ်သိန်းရှိသောအိုအေစစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တခြားသေးငယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် Ghat, Murzuq o ဂဒါမီ.
Uweinat တောင်၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောရုပ်ရုပ်
Uweinat အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကြားဖြန့်ဝေသည် အဲဂုတ္တုပြည်၌လစ်ဗျားကိုယ်တိုင်နှင့်ဆူဒန်။ ၎င်းကိုဆာဟာရသဲကန္တာရနှင့်ဝန်းရံထားသည် ဘာဟာရီယာ o ဖာရာဖရာ။ ထိုဒေသသည်စွန့်စားခန်းကိုနှစ်သက်သောခရီးသွားများအတွက်အားကောင်းသောသံလိုက်ဖြစ်သည်။
အယ်လ် Fezzan မှာစခန်း
ဒါပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်တော့လွင်ပြင်ထဲမှာရှိနေတာပါ Gilf kebir ပန်းပုကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်နှင့် အရုပ်ရုပ် တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအလွန်ဟောင်းနွမ်း။ သူတို့ကိုအီဂျစ်စူးစမ်းရှာဖွေသူကတွေ့ရှိခဲ့သည် Ahmed Hassanein Pasha ၁၉၂၃ ခုနှစ်မှာဒီနယ်မြေဟာကီလိုမီတာ ၄၀ အကွာအဝေးကိုခရီးထွက်ခဲ့ပေမယ့်အဆုံးအထိရောက်မလာသေးပါဘူး။
နောက်ဆုံးဒီinရိယာထဲမှာအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ် Kebira မီးတောင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းငါးသန်းခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောcolရာမareaရိယာလေးထောင်ငါးရာစတုရန်းကီလိုမီတာကိုဖုံးလွှမ်းသည့်ဥက္ကာခဲ၏သက်ရောက်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
သငျသညျဆိုပါစို့သကဲ့သို့, ဆာဟာရရှိပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆိုးရွားဆုံးသောရာသီဥတုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်မှာဤမျှကြီးမားသောareaရိယာသည်မတူကွဲပြားသောရာသီဥတုများကိုအတင်းအဓမ္မတင်ပြရန်ရှိသည်။ သို့သော်အပူချိန် ၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သောမိုးနှင့်အပူလွန်ကဲမှုအားလုံးနီးပါးသည်ယင်းတို့အားလုံးအတွက်ဘုံဖြစ်သည်။
တကယ်တော့နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီများတွင်သဲကန္တာရလေ့လာရေးခရီးကိုနေဝင်ချိန်တွင်သာပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆာဟာရသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်များဖြစ်သည် ဆောင်း ဦး နှင့်ဆောင်းရာသီပိုမိုတိကျစွာနိုဝင်ဘာလမှဖေဖော်ဝါရီလအထိဖြစ်သည်။
နှင့်, လေ့လာရေးခရီးအဘို့, သင်အမြဲရွေးချယ်သင့်ပါတယ် စနစ်တကျ။ သငျသညျဤမပါဘဲသဲရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူး အရည်အချင်းပြည့်မီသောလမ်းညွှန် မင်းရဲ့အသက်တာကကြီးလေးတဲ့အန္တရာယ်ရှိလိမ့်မယ်။
ဒီcolရာမသဲကန္တာရကိုသွားဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကိုငါတို့မအကြံပြုနိုင်ဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကသင်ကမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေဆီကနေချဉ်းကပ်လို့ရတယ်။ သို့သော်ပုံမှန်အရာပါပဲ သင်သည်အနီးအနားရှိမြို့သို့ပျံသန်းသည် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲအချို့ငှားရမ်းပါ စနစ်တကျအလည်အပတ်ခရီး.
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် Moroccan Sahara သို့သွားလိုလျှင်ကဲ့သို့သောမြို့များသို့ပျံသန်းနိုင်သည် Marrakech နှင့်တစ်ချိန်ကအဲဒီမှာ, လေ့လာရေးခရီးရှာဖွေပါ။ သို့သော်သင့်အားကမ်းလှမ်းသောအထူးအေဂျင်စီများရှိပါသည် တစ်ခုလုံးကိုခရီးသွားအထုပ် သငျသညျမသွားမီ။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ နွေးတို့တွင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး။ ၎င်းသည်နိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုလွှမ်းခြုံထားပြီးသဘာဝအံ့ဖွယ်ရာများ၊ အိပ်မက်ဆိုးများရှိသောမြို့ကြီးများနှင့်ကျောက်တုံးများအတွင်းရှိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအက္ခရာများကိုဖော်ဆောင်ပေးသည်။ ငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ဤossရာကိုသိရန်ဝံ့သလော။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဆာဟာရသဲကန္တာရ